बाँदर ले गर्दा किसान को बाली नस्ट | साँचो खबर Online Khabar
स्याङ्जा ।। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । जहाँ करिब ६६ प्रतिशत नेपालीहरु कृषि पेशामा संलग्न छन् । कृषि पेशाले व्यावसायिक, औधोगिक उत्पादनको रुप लिने प्रयास गरेको पाइन्छ । तापनि परम्परागत कृषि प्रणालीको अझै पनि बाहुल्यता रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा किसानहरुले अनेकन समस्या सामना गर्दै आउनु परेको छ । ती विविध समस्या मध्ये नेपालको सन्दर्भमा बाँदरको प्रकोप पनि एक हो । यहाँ बाँदर आतंकबाट कृषकले भोग्नु परेका समस्या उठाउन खोजिएको छ ।
संघ, प्रदेश वा स्थानीय पालिका तह मध्ये कुन तहको क्षेत्र अन्तर्गत यो समस्या निराकण गर्न पहल गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा कृषकले थाहा पाउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा किसानका तर्फबाट यो ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको छ । यो विषय जो–जो सँग सम्बन्ध राख्दछ । उनीहरुबाट समाधान गर्न र उठाइएका प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा गरिन्छ । यो किसानको एक बेदना र श्रमको मूल्यको खोजी पनि हो ।
राज्यले बाँदरको संरक्षण गर्ने तर किसानको बाली खानबाट नियन्त्रण नगर्ने हुँदा किसानले खान बाँच्न गुजारा चलाउन लगाएको बाली बाँदर पाल्नका लागि लगाए जस्तो हुन गएको छ । के राज्यले बाँदरको संरक्षण गर्नु भनेको किसानले खुवाएर पाल्नु हो ?
हिंसाका प्रकारहरु मध्ये मानसिक र शारीरिक हिंसा पिडादायी हुन्छन् । किसान आफूले लगाएको बाली जोगाउन बाँदर लखेट्न, धपाउन दिनभर दौदिन्छ । यति सम्मकी यसले समयमा खाना खान, नास्ता पानी खान ,चिया पिउन समेत ठीक समयमा पाउँदैनन् । बिना उपलब्धी दिनभर दौडिदा शारीरिक पीडा हुन्छ भने के यो शारिरीक हिंसा होइन ? छाक टार्न (कमाउन होइन) जीवन धान्न भनि लगाएको खेतीबाली बाँदरले आफ्नो आँखा अगाडी खाइदिदाँ के किसानलाई मानसिक पिडा हुँदैन त ? हुन्छ भने यो मानसिक हिंसा हो की होइन ?
बाँदरले किसानले लगाएको खाद्यान्न फलफूल तरकारी बाली मध्ये करेला र कुभिण्डो बाहेक सबै खाइ दिन्छ । बाँदरले मकै, गहुँ, धान, कोदो, काँक्रा, घिरौला, लौका, फर्सी, सखर खण्ड, गिठा, भ्याकुर, मेवा, नासपती, सुन्तला, केरा, उखु, आलु, अम्बा, आँप, सिमी, बोडी जस्ता कोशेवाली आदि सबैजसो बाली खाएर सताउँछ । यी बाली बाहेक कृषि विशेषज्ञहरुले किसानलाई कुन खेती गर्ने सल्लाह दिन सक्छन् ? सल्लाहको आशा गरिन्छ ।
आजभोली व्यावसायिक खेतीको कुरा गरिन्छ । जहाँ पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन समेतका कार्यक्रम बनाइन्छ । के यस्ता कार्यक्रम बाँदरले नसताउने गाँउका किसानका लागि मात्र हो ? होइन भने बाँदरले सताउने ठाउँका किसानले बाँदर पाल्नका लागि यस्तो खेती गर्न तयार होलान् ? औद्योगिक उत्पादनको नाममा परम्परागत रुपमा खेती गर्ने किसानलाई उपेक्षा गर्न पाइन्छ । जब की परम्परागत उत्पादन अरु केही नभए पनि निर्वाहमूखी त छ नि । जस्ले कैयन विदेशिने मुद्रा बचाउ हुन्छ, अर्थशास्त्रीहरु यस्तै बताउँछन् ।
वर्तमान व्यवस्था अनुसार किसानले खेतबारीमा आफूले लगाएको बाली उत्पादन आफै उपभोग गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । आफूले लगाएको बाली अरुले लुटेर लगेमा कानून बमोजिम न्याय माग्ने अधिकार पनि छ । किसानले लगाएको खेतीबाली बाँदरले लुटेर लगिदिँदा या खाइदिदा किसानले आफ्नो श्रमबापतको उत्पादन आफै उपभोग गर्न पाउने अधिकार लुटियो कि लुटिएन ? के यसबेला किसानले आफ्नो श्रमकोे मूल्य पाउँछ ? के मानव श्रम बिना मूल्यको हो ? के किसानले गर्ने श्रम बाँदर पाल्नकै लागि हो त ? किसानको बाली बाँदरले लुटेर लगिदिदा के किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ ?
मानिस एक सामाजिक प्राणी हो । किसान पनि एक मानव हो । जसले कहिलेकाही स्थानीय सभा, गोष्ठी, भेला, बैठक, श्रमदान आदि जस्ता कार्यमा समावेश हुनु पर्ने हुन्छ । तर, बाँदरकै कारण किसान यस्ता कार्यमा सामेल हुन पाउदैनन् । के यस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा सुटेड, बुटेड मान्छेले मात्र भाग लिने हो ? यस्ता कार्यमा किसान सामेल हुन पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने बाँदरलाई खेतीबाली सुम्पेर भाग लिन सम्भव छ ? किसानले कृषि सम्बन्धी तालिम लिन पाउने कुरा त सपनाकै विषय मात्र हुन गएको छ ।
समाजमा विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार, पुजाआजा आदि जस्ता क्रियाकलाप संचालन हुन्छन् । जहाँ नातागोता, इष्टमित्र, छिमेकी सवै सामाजिक रुपले जुटेर यस्ता कार्य सम्पन्न गर्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा, गाँउघरमा विद्यमान छ । तर, बाँदरकै कारण एक किसान यस्ता कार्यक्रममा समावेश हुनबाट बञ्चित हुन्छ । पूँजीवाला र शहरियाहरुले त पार्टी प्यालेस जस्ता ठाउँमा ठूलो धनराशी लगानी गरेर पनि यस्ता कार्य संचालन गर्लान् । के किसानका लागि यो सम्भव छ ? छैन । बाँदर धपाउन छाडेर यस्ता कार्यमा भाग लिन गएमा बाँदरले आफ्नो उत्पादन सखाप पार्छ । को किसानलाई निम्ता मान्न वा यस्ता सामाजिक कार्यमा भाग लिन नपाउँदा मानसिक तनाव हुँदैन ?
माओवादी र सरकारको द्धन्दको बेला नेपालमा करीब १८ हजार जति मानिसले मृत्यु वरण गर्नु प¥यो । त्यसबेला माओवादी वा सरकारी कुन पक्षका कदम सही थिए ? त्यो छुट्टै बहसको विषय होला । तर, दुवै पक्षबाट जो नागरिकले शहादत प्राप्त गरे । त्यो उनीहरुको भनाइ अनुसार मानव हितका लागि हो । यदि अहिले बिद्यमान बादर आतंक मानव हित बिरुद्ध छ भने बाँदरलाई मार्न किन नपाउने ? जबकी मानव हित विरुद्ध जाने मान्छेको हत्या गरिन्छ या जेलमा राखिन्छ । मानव हित विरुद्ध जाइलाग्ने बाँदरको संरक्षण गरिन्छ । कस्तो बिडम्बना !
पौराणिक कथा अनुसार महाभारत युद्धमा जानु अगाडि आफ्नै वंशका दाजुभाई कौरव, आफ्ना गुरु दोणाचार्य जस्तालाई पनि गोली हानी मार्दा मानव हितको पक्षमा हुने भएकोले गोली हान्न भनि कृष्णले अर्जुनलाई सल्लाह दिए भनिन्छ । मानव हितका लागि आफ्ना वंशीय दाजुभाई र गुरु समेतलाई गोली हानी मार्न हुने तर मानव हित बिरुद्ध काम गर्ने बाँदरलाई संरक्षण किन ?
कतिपय बातावरणबिदले वातावरणीय सन्तुलनका लागि बाँदर संरक्षण हुनुपर्ने बताउँछन् । पारिस्थितिक पद्धती (Ecosystem) को नियमानुसार बाँदर एक उत्पादक नभइ प्राथामिक तहको उपभोक्ता मात्र हो । जैविक दुनियामा कुनै एक जाती, प्रजातीको अनपेक्षित बृहदी हुन गएमा बाँकी अरु जीवहरुलाई रहन बाँच्न, अस्तित्व जोगाउन कठिन हुन्छ । जुन बेला त्यो अनपेक्षित बृहदी भएको उत्पादक,जीवलाई संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । बाँदर जस्तो उपभोक्ताले घाँसपात, अन्नपात, फलफूल आदि खाइ बाँचेको हुन्छ । के बाँदरले खान्छ ती सबै बस्तु मानिस वा मानिसद्धारा पालिएका घर पालुवा पशुपंक्षीले खाएर बाँच्न सक्छन् । जुनबेला (Ecosystem) कायम राख्न बाँदरको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले पनि यसको नियन्त्रण मात्र होइन, उन्मूलन भए पनि बातावरणमा नराम्रो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।
वातावरणकै कुरा गर्दा खेतीयोग्य जमिन, पाखाभरी वनमारा, उन्यू, निलो बोके आदि जस्ता बनस्पती हुर्कन दिदाँ के बातावरणमा नराम्रो प्रभाव पर्छ ? पर्दैन । तर पनि यस्ता बनस्पतीलाई कृषि कर्मका दृष्टिबाट हुर्कन बढ्न दिइदैन । किनकी यस्ता बनस्पती भ्याए सम्म कृषकले मास्नु पर्ने हुन्छ । यस पक्षलाई मध्यनजर गर्दा मानवहितको पक्षमा नरहेको बाँदरको संरक्षण गरिरहन आवश्यक छैन ।
मुसा एक विकसित स्तनधारी जिव हो । जसले मानवहितका विरुद्ध काम गर्ने भएकाले वैधानिक रुपमै विष प्रयोजन गरेर मार्न पाइन्छ । प्राकृतिक जिवको संरक्षणकै कुरा गर्ने हो भने मुसा जस्तो स्तनधारी जिवलाई किन संरक्षण नगरी मारेको त ? किनभने मुसाका क्रियाकलाप मानव हितका बिरुद्ध छन् । त्यसैले पनि बाँदरको अनियन्त्रित संरक्षण गर्नु आवश्यक छैन ।
मानिसको जनसंख्या वृद्धि हुँदा आधारभूत र मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव भनौ वा गाह्रो हुने भनि जनसंख्या नियन्त्रण गर्न मानिसले परिवार नियोजन गर्नुपर्ने तर बाँदरले १२ औ महिना असिमित संख्यामा बच्चा जन्माइ संख्या बृद्धि गर्दै जाने । के यो प्राकृतिक नियमानुसार छ ? यसकाबारेमा गम्भीर बहस, चिन्तन मनन जरुरी छ ।